Golaha Wasiirada Hirshabelle oo Ansixiyay Miisaaniyada 2020ka - Jowhar Somali Leader
Home News Golaha Wasiirada Hirshabelle oo Ansixiyay Miisaaniyada 2020ka
Golaha Wasiirada Hirshabelle oo Ansixiyay Miisaaniyada 2020ka
Shir aan caadi aheyn oo golaha wasiirada Dowladda Hirshabelle ku yeesheen maanta magaalada Jowhar ayaa waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyada 2020 oo ay soo gudbisay Wasaaradda Maaliyada Hirshabelle.
Madaxweynaha Dowlad Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shir Guuddoominayay shirkan, iyadoo goob joog uu ahaa Madaxweyne ku xigeenka Cali Guudlaawe Xuseen ayaa looga hadlay arrimo kale duwan oo la xiriira Miisaaniyada 2020, Qatarta Cudurka Saameynta ba’an ku hayo ee Coronovirus, sidii bulshada looga wacyi galin lahaa qatartaas iyadoo Warbixino laga dhageystay qaar ka mid ah Wasiirada Hirshabelle.
Golaha Wasiirada Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa kulankan ku anisixiyay Miisaaniyadda 2020 oo ka kooban dakhliga gudaha ka soo xerooda iyo deeqaha laga helo dowladda dhexe iyo hay’adaha caalimiga ah, waxaana ay gaareysaa miisaaniyadaasi $14,010,984 “Afar iyo toban malyan toban kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo afar dollar”.
Sidoo kale Golaha Wasiirada Hirshabelle ayaa si qoto dheer ugaga hadlay saameynta cudurka qatarta badan ee Coronovirus, iyagoo isku raacay in si wadajir ah looga shaqeeyo ka wacyigelinta bulshada cudurkaas,waxaana la joojiyay dhammaan goobaha waxbarashada sida jaamacadaha, iskuulada iyo dugsi qur’aanka muddo labo toddobaad ah.
Baarlamaanka Hirshabelle ayaa loo gudbinayaa miisaaniyada ay golaha wasiirada maanta ansixiyeen si ay ugu codeeyaan.
Golaha wasiirada hirshabelle oo maanta kulmay